नाटकीय शैलीमा बिरामीको उपचार,हेर्दाहेर्दै यसरि गयो बिरामीको ज्या,न,उपचार गर्ने डाक्टरको यस्तो बहाना -
नाटकीय शैलीमा बिरामीको उपचार,हेर्दाहेर्दै यसरि गयो बिरामीको ज्या,न,उपचार गर्ने डाक्टरको यस्तो बहाना
२७ बैशाख,काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनमा कोरोनाभाइरसका कारण सङ्क्रमित हुने र मृ,त्यु हुनेको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । अस्पतालमा पुग्न एम्बुलेन्स सहजै नपाइने र अस्पताल पुगे पनि धेरै प्रभावित क्षेत्रमा उपचार सेवा सहजै उपलब्ध नहुने गुनासो सङ्क्रमित परिवारको छ । झन् सङ्क्रमितमा जटिलता देखिँदा सघन उपचारका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर पाउन त सम्भवै नहुने वा केही दिन पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको मानिसहरूको गुनासो छ ।
सङ्क्रमणको पहिलो लहरका बेला धेरैजसो वृद्धवृद्धा वा ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई मात्रै गाह्रो भएकोमा यस पटक युवा उमेरकै मानिसलाई पनि अस्पतालमै उपचार गर्नुपरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । कतिपयलाई अस्पताल पुरेउदा पनि सहि तरिकाले उपचार हुन् सकेको छैन । अस्पतालको लापरबाही कै कारणले पनि कतिपयको अकालमै ज्या,न गएको छ । कतिपय घट,ना उपचार गर्ने निहुमा बाहानामा ज्या,न समेत गएका समाचार दिनप्रतिदिन आएका छन् । उपचार गर्ने बाहानामा सोझा जनताको आखामा छारो हालिरहेका कतिपय अस्पाल बिरुद्द बिरोध भएका छन् भने अस्पातालको ज्यादादी भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
यस्तै घट,ना घटेको छ पोखराको मणिपाल अस्पतालमा । मणिपाल अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याएका बिरामीलाई सहि तरिकाले समयमा उपचार नहुदा ज्या,न गएको खुलासा भएको छ । अक्सिजन कम भएको बेला अक्सिजन गलत तरिकाले लगाएको ताकी आखा छलेर गलत तरिकाले उपचार भएको भिडियो बाहिरिएको छ । बिरामीको मृ,त्यु भैसकेको छ तर अस्पतालले अझै स्वकार गरेको छैन । कोरोनाको उपचार गर्न ल्याईएको बिरामीलाई काम नगर्ने मेसिन जोडेको भिडियो बाहिरिएको छ । यसरि अस्पताल नै लाचारि बन्ने हो भने भने अस्पतालमा पुगेर पनि बाच्न सकिएला जस्तो छैन । हेर्नुहोस पोखराको फेवा टेलिभिजनले तयार पारेको यो भिडियो :
Previous स्वर्णपदक विजेता सागरको पुरा भएन सपना ! गोलीकाण्डमा एक नेपालीको मृ,त्यु, एक घाइते
Next देश शंकटमा ! प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाए नेता देउवाले यस्तो आरोप